आमा, गोठ र अरुण – Martin Chautari
आमा, गोठ र अरुण
- कैलाश राई, कैलाश राई | 2021-09-24
चुक घोप्ट्याएझैँ अँध्यारो रात  । ढिकी कुटेको आवाज एकनासले मेरो कानमा गुन्जिरहेको थियो  । बेलाबेला कुकुर भुकेको आवाज पनि सुनिन्थ्यो । ढिकीको आवाज बन्द हुनासाथ मनमा आस पलाउँथ्यो— अब त आमाको काम सकियो होला कि ? म ओछ्यानमा कुकुरजस्तो कुक्रुक्क परेर उनलाई कुरिरहेकी हुन्थे ।
ह्वास्स रक्सीको गन्ध आएसँगै आपाको आवाज पनि आयो— ‘ए, आमा तिमी पो ! देशमा बहुदल आयो । खुसियाली मनाइयो ।’ ‘घरको नीति थाहा छैन राजनीति गर्ने भइखाको, जाँ... । भात खान आइज । अनि चुपचाप सुत् ।’
म आफ्नी आमा कुर्दै थिए । बोजु (हजुरआमा) आफ्नो छोरा कुर्दै थिइछन् क्यार । केहीबेरमा घ्वारघ्वार घुरेको आवाज कानमा पर्दै थियो । त्यसपछि केही थाहा पाइनँ । दिनभरिको मेलापातबाट फर्केपछि साँझको भातभान्सामा सबै परिवार एकैसाथ हुन्थ्यौँ । भातभान्साको काम सकिएपछि ढिकी जाँतोको काम सुरु हुन्थ्यो । म घरी उनलाई ओछ्यानमा एक्लै कुरिरहेको हुन्थें । घरी उनीसँगै ढिकी–जाँतो गर्ने ठाउँमा सँगै जान्थे । उनको छेवैमा बसेर मनमा लागेका जिज्ञासाहरू सोध्थे । उनी आफ्नै काममा व्यस्त हुन्थिन् । मेरो कुरामा उनलाई चासो हुन्थेन । बरु मलाई हकार्थिन्, ‘काम र थकान दुवै भएको बेला अनेक नसोध । सुत्, जा ।’ म अटेर भएर उङ्दै बस्थें । त्यहीं निदाउँथें । ओछ्यानमा ब्युँझिन्थें । एक्लै ।
एक्लै हुँदा त्यो ओछ्यान चिसो लाग्थ्यो । चिसिएको ओछ्यानको एक छेउ मेरो लागि आत्मीय थियो— जहाँ आमा सुत्थिन् । त्यहाँ आमाको गन्ध हुन्थ्यो । पसिनाले भिजेर ज्यानमै सुकेको मखमलको चौबन्दी चोलो, चोलोको खल्तीमा अटुट रहने सुर्ती र चकमक, हिलो–धूलो–माटोको टाटा लागेको लुंगी, कम्मरमा बाँधिएको खेसको पटुकीको पोल्टाभित्र बोकिएको सातु, मकै भटमास, कोलमा पेलेको तोरीको तेल दलेर बाटिएको लामो कपालसँगै आमाको शरीरको आफ्नै गन्ध । यी सबै गन्धको सम्मिश्रणले एक अलग्गै खालको गन्ध बनेको थियो । मेरा लागि त्यही गन्ध नै आमाको पहिचान थियो । त्यही गन्धले आमाको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । त्यो गन्ध र मबीच गहिरो सम्बन्ध बनेको थियो । त्यही गन्धमार्फत् म आमाको अनुपस्थितिमा पनि उनको सामीप्य महसुस गर्थे ।
भालेको डाँकसँगै उनी काममा लागिसकेकी हुन्थिन् । म ब्युँझिँदा कहिले उनी दैलो पोत्दै हुन्थिन्, कहिले आँगन बढार्दै गरेकी । कहिले पँधेराबाट पानी ल्याइरहेकी हुन्थिन् । कहिले बाछाबाछी, पाठापाठी र तिनका माउँहरूलाई कुँडो खुवाइरहेकी हुन्थिन् । कहिले तिनको मलमूत्र सोहोर्दै सोतर बिछ्याइरहेकी हुन्थिन् । कहिले भने यी काम सकीओरी पोल्टामा मकै भटमास वा सातु पोक्याएर खाँदै खाँदै घाँसदाउराका लागि हिँडिसकेकी हुन्थिन् । बिहानको खानापछि मेलामा हिँडिहाल्थिन् । म सधैं आमासँगै हुन चाहन्थें । खै किन हो, मैले थाहा पाएदेखि नै त्यसो हुनै पाउँदैनथ्यो ।
उनी जम्दार खलककी कान्छी छोरी । ११ वर्षकी थिइन् । त्यही साल ९ वर्षीय केटोसँग धुमधामले मागी बिहे भयो । कलिलो बिरुवालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेझैँ आमालाई खउटोलबाट खम्बुक भन्ने गाउँमा सारियो । उनी खानदानकी जेठी बुहारी बनेर हुर्किइन् । कुनै प्रश्न वा संकोच जाहेर नगरीकन अह्राएको काम खुरुखुरु गर्थिन् । अर्थात् आज्ञाकारी, सहनशील र इमानदार नाम्मि (बुहारी) बनिन् । नाम्मिको सट्टामा उनलाई वात्पाङ्मी (राईभित्रकी वात्पाङ् पाछाकी भएकीले) भनेर पनि बोलाउने गरिन्थ्यो । मामाघर जाँदा मेरा माइजूहरूले आमालाई खम्बुकमी (खम्बुक बस्ने महिला) भनेर बोलाउँथे । मेरी दिदी जन्मिएपछि अर्को चिनारी थपियो– हर्कीम्मा (हर्कीको आमा) । त्यसपछि म जन्मिएँ । म जन्मेपछि हर्कीम्माको चिनारीमा कुनै फेरबदल भएन ।
उनी दुङ्माली बोल्थिन् । खसे पुक (नेपाली भाषा) कामचलाउ बुझिm्थन् । टुक्राटात्री बोल्थिन् । कसैले उनलाई बोलाएमा वा कुराकानीमा आफ्नो सहभागिता जनाउनका लागि ‘हजुर’ वा ‘ज्यू’ ले प्रतिक्रिया जनाउँथिन् । राई र तामाङहरूको सगोल बसाइ भएकाले तामाङ भाषा भने राम्रैसँग बुझ्थिन् । औपचारिक शिक्षा थिएन । घरमै साँवा अक्षर चिनेकी । लेखपढ महत्त्वपूर्ण छ, लेखपढका लागि खसे पुक अनिवार्य छ भन्ने बुझेकी थिइन् । दिदी र मेरो पढाइका लागि उनी चिन्तित थिइन् । प्रायः आमाहरूझैँ उनी पनि आफ्नो जीवनभन्दा सन्तानको जीवन राम्रो होस् भन्ने ध्याउन्नमै थिइन् ।
दिन बित्दै जाँदा मेरा दैनिक जिम्मेवारी तोकियो– बिहान उठेर अमखोरा माँझ्नु, माझिसकेर ताजा पानी भरेर पिउनका लागि तयारी अवस्थामा लस्करै राख्नु, दैलो र आँगन सिनित्तै बढार्नु, कुखुराहरूलाई खोरबाट निकालेर चारो खुवाउनु, पाठापाठीलाई घाँस दिनु आदि । म तीन वर्षको नहुँदै मेरा लागि डोको–नाम्लो बुनिसकिइएको थिएछ । मैले डोकोमा हालेर बोक्न सक्ने पानीको गाग्री पनि थियो । त्यसबेला परिवारका सबैले त्यो सानो डोको–नाम्लो र पानीको गाग्री ‘तेरो हो’ भन्थे । मेरो भनिइएको डोको–नाम्लो बोकेर आमासँगै घाँसपात वा गाग्री लिएर पानीपँधेरा जान पाउँदा कम्ता खुसी लाग्थेन । स्कुल जान थालेपछि हातले बुनेको अध्रानो झोला पनि मेरो भयो । त्यसभित्र मभन्दा पहिले स्कुल जाने कति जना बच्चाले बोकेर–पढेर केही च्यात्तिएका थोत्रा किताबहरू हुन्थे । कोही बच्चा अर्को कक्षा चढेपछि ती किताबहरू मेरा लागि राखिदिनू भन्ने आमाको मागअनुसार मैले ती पुस्तक पाएकी हुन्थें, जसलाई आमाले प्लास्टिकको खोल लगाइदिएर सियो धागोले उनेर बलियो पारिदिएकी हुन्थिन् । त्यही किताब झोलामा बोकेर स्कुल जान्थें ।
काका ब्रिटिस लाहुरे भएपछि धरानमा घरघडेरी जोडेर उहाँको परिवार उतै बस्न थालेका थिए । काकीसँगै बसेर दिदी पनि धरानमा पढ्ने जोहो भएपछि ठूली छोरीको चिन्ता लिनबाट आमाले केही हदमा छुट्कारा पाइन् । मैले स्कुलमा के पढें वा के सिकें भन्नेबारेमा आमाबाहेक कसैलाई वास्तै थिएन । खसे पुकमा पढाइ हुँदा केही नबुझेकाले वाल्ल परेको तर त्यहाँ साथीहरू भेटेको र मस्ती गरेर फर्केको कुरा सुनाउँथे । ‘सबैको अ–आफ्नै खालको बुद्धि हुन्छ । तेरो पनि छ । म खसे पुक राम्रो बोल्न जान्दिनँ । तैपनि कामकाज चलाएकै छु । तैँले बिस्तारै बिस्तारै सिक्छस् । सबै कुरा बुझ्छस्,’ उनी मुसुक्क हाँस्थिन् ।
उनैले मलाई सम्झाएकी थिइनँ– सिक्नका लागि भाषा होइन, भन्न खोजिएको वा बुझाउन खोजिएको कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यसले खसे पुक नजानेकोमा हीनभावना र डरलाई जित्ने साहस बटुल्न सघायो । बेँसीमा अलग अलग ठाउँमा गोठहरू थिए । त्यहाँ वर्षायाममा अर्थात् खेतीपातीको याममा गाईबस्तुहरू राखिन्थे । गर्मीमा उब्जिने अन्नबालीहरू लगाइन्थे । हिउँद लागेपछि अर्थात् खेतीपाती थन्काइसकेपछि गोठका बस्तुभाउहरू माथि निकालिन्थ्यो । खुला बारीहरूमा राखिन्थ्यो । एकजना गाउँले दाइ लामो समयदेखि गोठालोको भूमिकामा थिए । प्रायः चाडबाडको बेलामा र खेतीपातीको कामको चाप हटेपछि आमा बेँसीको गोठमा बस्ने दाइलाई पालो दिन झर्थिन् । बेँसीको गोठमा गोठाला बस्न जानु परिवारका अरू सदस्यको छनोटमा पर्दैनथ्यो । आमा भने नाइँनास्ती नगरीकन झर्थिन् । म उनी घर फर्किने दिनको पर्खाइमा हुन्थें । जंगलमा फलेका मौसमी तुलफूल र ठेकीभरि दही लिएर घर फर्किन्थिन् उनी ।
आमासँगै बेँसी गोठमा म पनि झरें । अरुण नदीको किनारभन्दा केही उचाइमा थोरै सम्म परेको ठाउँमा गोठ थियो । त्यसलाई अक्करे गोठ भनिन्थ्यो । गोठमुन्तिर बारीको कान्लाहरूमा लहलहाउँदो सुर्तीका बोटहरू हरियै थिए । केही कान्लाहरू कोसा भरिएका गहतले भरिएका थिए । केही कान्ला बाँझै पनि थिए । त्यसभन्दा अलि पर गएर डिलबाट तल हेर्दा डरलाग्दो चट्टाने भीर थियो । त्यही भीरको फेदमा गड्गडाएर बगिरहेको अरुण नदी थियो । गोठमा बस्ने मान्छेले त्यही नदीको पानी पिउनुपर्थ्यो । गोठमा बस्नेको दैनिकी निश्चित थियो । बिहानै उठ्नु, गाईबाख्राहरूको थलोकिलो सरसफाइ गर्नु, बाछाबाछी र पाठापाठीहरूलाई कुँडो–खोले पकाएर दिनु, गाईको दूध दुहुनु, खाना पकाएर खाएपछि सबै गाईबाख्राहरू फुकाएर दिनदिनै जंगलको फरक फरक कुनाकाप्चा र दिशातिर चराउन लानु । दिनभरि गाईबाख्राहरूसँगै जंगल चहार्दै घाँसपात र केही तुलफूलहरू बटुलेर गोठ फर्किनु । आमाले बेलाबेलामा केही फरक फरक आवाज निकाल्थिन् । म बुझ्दिनथें । तर गाईबाख्राहरूले बुझेर त्यसको पालना पनि गर्ने गर्थें ।
‘यिनीहरू हामीजस्तो बोल्दैनन् । तर म यिनको कुरा बुझ्छु । यिनीहरूले पनि मेरा बुझ्छन् । मान्छन् । हामी एकअर्कासँग आफ्ना खुसी, दुःख बाँड्छौं । कुनै जंगली जनावरबाट खतरा भएको कुरा होस् वा बारीको बाली खान आउँदै गरेको बाँदरबारे होस् यिनीहरू मलाई बताउँछन् । अनुशासित र जिम्मेवार कसरी हुने भन्ने कुरा तैंले पनि यिनीहरूसँग सिक्न सक्छस्,’ आमाले भनेकी थिइन् । गोठमा बस्दा उनी प्रत्येक गाईबाख्राहरूसँग बात मार्थिन् । तिनलाई यसो गर उसो गर भनेर अह्राउँथिन् । तिनलाई घाउ–चोट लागेमा जडीबुटी खोजेर लगाइदिन्थिन् र ढाडस दिँदै धाप मार्थिन्, ‘पीर नलिनू छिट्टै बिसेक हुन्छ । आफ्नो ख्याल राख्नू । पड्के झिँगालाई चाहिँ बस्नै नदिनू है ।’ तिनले आमाको हात चाट्थे । सायद कृतज्ञता जनाएका हुन् कि !
आमाले धेरै माया गर्ने एउटा बूढी गाई थियो— माली । ऊ अगुवा थिई । ऊ चरनका लागि बाटो लागेपछि अरूले पछ्याउँथे । ऊ आफ्नो थलोकिलोमा उभिएपछि अरू पनि त्यसै गर्थे । एक रात बाघ जोडले करायो । त्यसलगत्तै मालीले अनौठो आवाज निकाली । उसले सबैलाई निश्चिन्त र सतर्क रहन भनेकी हुन् भनेर आमाले अर्थ्याइदिएकी थिइन् । यदि उसले त्यसो गरिन भने सबै गाईबाख्राहरू अत्तालिएर दाम्लो चुाडाएर भाग्न खोज्छन् । त्यसो गर्दा चोटपटक लाग्ने र झन् बाघले चाहेझैँ आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने आमाको अनुभव थियो ।
‘माली सबैको आमा हो,’ ‘कसरी ?’ ‘मालीले जन्माएका ५ वटा गाईहरूले ४, ५ बेत ब्याइसके । नाति–पनाति पाइसक्यो मालीले । उसले जन्माएको राँघे, झिल्के, पाँग्रे र राते गोरुहरूले हाम्रो बारीखेतहरू जोतेको धेरै भइसक्यो । मालीले आफ्नो बाछाबाछीसँगसँगै हामीलाई दूध, दही, घ्यू, मोही दिएको धेरै भइसक्यो । हामीमाथि मालीले धेरै गुन लाएको छ ।’
एक दिन आमाले माली गाईको दाम्लो फुकाल्दै केही भनिन् र हातले माथिल्लो डाँडातर्फ इसारा गरिन् । माली अघि लागिन् । हामी उसलाई पछ्याउँदै गयौँ । जंगल फाँडेर खेती गर्न बनाइएको टारजस्तो ठाउँ छेउ पुगेपछि माली घाँस चर्न लागिन् । अरू गाईबाख्राहरू पनि तितरबितर भएर चर्न थाले । त्यहाँनेर केही मध्यम खालका रूख, सथिबयर, खिर्रा र अरू मैले नचिनेका पोथ्रापोथीहरू झाँगिएका थिए । ‘पहिले पहिले यहाँ कपासको खेती गरिन्थ्यो । कपासबाट लत्ताकपडा, ओढ्ने—ओछ्याउने सबै बन्थ्यो । हामी सबैले मिलेरे बनाउँथ्यौँ । अहिले त यी मैले पनि लाहुरबाट ल्याको लुगा लगाको छु । मैले बाँधेको पटुकी मात्रै यहींको कपासबाट बनाएको हो’ आमाले त्यत्ति भनेपछि कपासबाट कपडा बन्दोरहेछ भन्ने बुझें ।
चकमन्न राति अरुण किनारैकिनार पूर्व दिशातर्फ हेर्दा उज्यालोको सानो थोप्लो देखियो । ‘त्यो के हो ?’ ‘राँके भूत त होइन ? होइन, होइन, राँके भूत लस्करै राँको बालेर हिंड्छ । अँधेरी घाट छेउछाउ परदेशीहरू बास बसेका होलान् ।’ अँधेरी घाट धनकुटा–भोजपुर आउजाउ गर्दा डुंगाले अरुण नदी तर्ने एउटा थलो थियो । अरुण आसपासको धेरै कुरासँग आमा परिचित थिइन् । रूखविरुवाहरूको नाम र कामबारे जानकार थिइन् । अरुण किनारमा रहेका खयरको सुकेको बोक्रा नुन पानीसँग उमालेर खाँदा ओखती हुन्छ भन्दै मलाई दिएकी थिइन् । गोठ आसपास र टाढाटाढाका जंगलमा पाइने आँपको गुण–दोष र नाम बताउँथिन् । फँडेर (जमुना), बेल, रूख कटहर, सरिफा, अमला, तितिरी आदिको रूखहरू कहाँ कहाँ कति छन् र तिनको स्वाद कस्तो कस्तो छ भनेर सुनाउँथिन् । अरुणपारि के कसो होला भन्नेबारेमा उनको कौतूहल पनि उत्तिकै थिएछ । १० दिनको साथ, स्नेही पलहरू र आपसी संवादहरूबाट मैले थाहा पाएँ– गोठमा उनी धक फुकाएर बस्दिरहिछन् । आफू भएर बाँच्ने रहिछन् । आमा र म सुखद र छोटो वनबासबाट फर्क्यौँ ।
साविककै दिनचर्या सुरु भयो । एक हिउँद कटेर अर्को हिउँद लाग्यो । खेतीपाती थन्कोमन्को लगाइए । काकी धरानबाट पहाड निस्किएकी थिइन् । आमा पनि काकीसँगै अरुण काटेर धनकुटा–धरान घुम्न जाने भइन् । उनी भित्रभित्रै निकै खुसी थिइन् । म भने न्यास्रिएकी थिएँ । अरुणपारिको गाउँ हेर्थें । आमा त्यही बाटो भएर गएकी होलिन् । त्यही बाटो भएर छिट्टै फर्किनेछिन् भन्ने गर्थे । १५ दिनपछि उनी फर्किइन् । नौलो ठाउँ, नयाँ मान्छे, नयाँ चालचलन देखेर चकित र उत्साहित भएको कुरा मसँग गरेकी थिइन् । उनको खसे पुक बोल्ने सीप पनि बढेको थियो । ‘अरुण तरेर आफ्नो भविष्य खोज्नू’ छोरीको राम्रो भविष्य खोज्ने सम्भावित ठाउँ बाहिरफेर छ भन्ठानेर होला फर्केपछि उनले भनेकी थिइन् । फर्केलगत्तै दमको रोग निकै बढेपछि आमाले बिँडी पिउन छाडिन् । उनको स्वास्थ्य स्थिति सुध्रिएन । बिमार छु भनेर ओछ्यान पनि लागिनन् । स्थानीय ओखती, स्वास्थ्य चौकीको दबाई र नाक्छोङको विद्याले बिसेक नभएपछि थप उपचारका लागि धरान झर्ने निधो भयो । दिदी धरानबाट आमा लिन निस्किएकी थिइन् । ढाकरमा बोकी मागेर आमा उपचारको लागि बाटो लागिन् ।
‘कछी (कान्छी) राम्रोसँग बस्दै गर् । म जाती भएपछि आउँछु,’ बाटो लाग्दा भनेकी थिइन् । उनको आँखाभरि पानी टल्किएका थिए । ओझेल परिसक्दासम्म आमा र दिदी गएतिर म एकोहोरो हेरिरहेथें । पारि गाउँलाई बारम्बार हेर्दै आमाहरूले त्यो डाँडा काटिसके होलान् भन्दै आत्मलाप गर्थे– आमा फर्केपछि हामी फेरि बेँसी गोठ झर्नेछौँ । साथमा बिताउनेछौँ । रमाउनेछौँ । ढाकरमा आमालाई बोकेर जाने मान्छे भोलिपल्ट मध्याह्नमा समाचार लिएर आएको थियो— हर्कीम्मा रहिनन् । साँझ परेपछि अँधेरी घाटमा बास बसेका थिए रे । बिहान भाले बास्न नपाउँदै आमाको सास टुट्यो अरे । घरकाले भने— वात्पाङ्मिरनाम्मिले हामीलाई छोडेर गइन् । आपाले भने— हर्कीम्मा बितिन् । मामालीकाले भने— खम्बुकमीले आफ्नो दुःख लुकाइन् । मैले भनें— मेरी आमा धरान झरेकी छन् । सुद्धईँ (मृतकको नाममा गरिने काजकिरिया) को काम सुरु गरियो । म भने आमा गन्तव्यमा पुगेर उपचार गराइरहेकी होलिन् भन्ठान्थें । आमाको गन्ध बोकेको ओछ्यान सुरक्षित राख्न मैले रोइकराइ गरें । सित्नङ (मृतक) ले भोगचलन गरेको प्रिय बस्तु राख्नुहुँदैन । सित्नङले माया मान्छन् । साथमा लान खोज्छन् र दुःख बिमार भइरहिन्छ भनी त्यसलाई नष्ट गरियो । तैपनि जाती भएर कुनै दिन आमा आउनेछिन् भन्ने आशामा बाँच्नु मलाई प्रिय लागिरह्यो ।
Previous आमा, गोठ र अरुण Next